အီလက်ထရောနစ်ညီလာခံကုမ္ပဏီများ - SHENZHEN KAISHENG PCB CO ။ , LTD
အီလက်ထရောနစ်ညီလာခံကုမ္ပဏီများ - PCBFuture
သော့ချက်စာလုံးများ - PCB တပ်ဆင်သည့်ကုမ္ပဏီများ၊ PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့စည်းဝေးပွဲ, PCBA ဝန်ဆောင်မှု
PCBFuture ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ PCB တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများရှာဖွေခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ PCBFuture က ISO9001: 2016 အရည်အသွေးစနစ်၊ CE EU အရည်အသွေးစနစ်၊ FCC စနစ်ကိုကျော်လွန်သည်။
နှစ်များတစ်လျှောက် PCB ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအမြောက်အများကိုစုဆောင်းခဲ့ပြီးထိုအတွေ့အကြုံများအပေါ်မှီခိုခြင်း၊ အဓိကသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနဌာနများနှင့်အကြီးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးဖောက်သည်များအားတစ်နေရာတည်းတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နမူနာများမှသုတ်ခြင်းအထိဤသည်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုဆက်သွယ်ရေး၊ လေကြောင်းနှင့်လေကြောင်း၊ အိုင်တီ၊ ဆေးကုသမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်တိကျမှန်ကန်သောစမ်းသပ်ကိရိယာများစသည့်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
Electronic Assembly Companies ဆိုတာဘာလဲ။
အီလက်ထရောနစ်တပ်ဆင်ရေးကုမ္ပဏီများသည်ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်အဖွဲ့များ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝါယာကြိုးကြိုးများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုသည့်ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၌လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်တတိယပါတီအားဤအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတပ်ဆင်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်လုပ်မှုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည့်သေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပေး၍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပြissuesနာများကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုကုမ္ပဏီ၏ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်သည်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထူးပြုရန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုအပါအ ၀ င်အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြtroublနာဖြေရှင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စနစ်ခွဲပေါင်းစည်းခြင်းကဲ့သို့သောထပ်ဆင့်တန်ဖိုးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါပေးသည်။ ထုတ်ကုန်ကြီးများကိုစာရင်းပြုစုရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်သော ၀ ယ်သူများကိုဤအချက်ကလွတ်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ဖောက်သည်များသည်ရုတ်တရက် ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာတုန့်ပြန်နိုင်သည်။
အင်ဂျင်နီယာများအားလုံးတွင် ၅ နှစ်ကျော် PCB အတွေ့အကြုံရှိသည်။
၁။ RoHS နှင့်ကိုက်ညီသော PCB များ။
2. RF PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
3. လေဆာ microvias, မျက်စိကန်းသော vias, သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ vias
5. PCB impedance စမ်းသပ်ခြင်း
၇။ Surface Mount နည်းပညာ
၈ ။ Thru-Hole နည်းပညာ
9. PCB လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများနှင့်ပရိသ
PCBFuture ၀ န်ဆောင်မှုသည်အဆင်အပြင်ဒီဇိုင်းမှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များအထိအပြည့်အဝဖြေရှင်းပေးသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်တိုင်းပြည်ရှိအထူးထုတ်လုပ်ထားသောစက်ရုံများနှင့်အတူသင်၏ဖောက်သည်များအားအချိန်မီပံ့ပိုးမှု၊ တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စျေးနှုန်းကောင်းများဖြင့်သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။